Barayaasha Nabadda Adduunka waxay la taagan yihiin Macallimiinta Afgaanistaan ​​- Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Wararka & Ra'yiga
Warar & Muuqaal
Siyaasadda & Sharci-dejinta
Nabadda Ed Bibliography
Xagee Lagu Baranayaa Nabada Ed
Dib u eegista buugaagta
SHAQADA & MAALGELINTA
KU BIIR & ENDORSE
[ Diseembar 4, 2021 ] Georg Arnhold Senior Fellow for Education for Peace Sustainable: Wac codsiyada Fursadaha maalgelinta
[ Diseembar 3, 2021 ] Xusuusta Olga Vorkunova, Exec. Xoghayaha Guddiga Waxbarashada Nabadda ee IPR Warar & Muuqaal
[Nofeembar 28, 2021] Islaamku waxa uu ina bari karo faragelinta goob joogga Warar & Muuqaal
[Nofeembar 27, 2021] Adeegga Nabadda Madaniga ah wuxuu raadiyaa Lataliyaha Waxbarashada Nabadda (Ukrayn) Jobs
[Nofeembar 13, 2021] Farriin degdeg ah oo ku wajahan bini'aadminimada - ka timid shinni shaqaale ah CV
Barayaasha Nabadda Adduunka waxay la taagan yihiin Macallimiinta Afgaanistaan
October 6, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 1
Macalimiinta: Wakiilada Horumarinta Aadanaha iyo Bulshada
"Waxbarashadu waa aasaaska aasaasiga ah ee bulsho kasta." - UN, Waxbarashada Dadka oo dhan
“… Si loo xaqiijiyo iimaanka xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah…. Xuquuqda siman ee ragga iyo dumarka… ” - Axdiga Qaramada Midoobay
"Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay waxbarasho." - Baaqa Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha
“… Hubinta waxbarasho tayo leh oo loo dhan yahay oo loo dhan yahay [oo ay ku jirto, waxbarashada aasaasiga ah iyo tan sare ee bilaashka ah ee dhammaan wiilasha iyo gabdhaha]” - - UN, Yoolalka Horumarinta Joogtada ah
Muddo qarniyo ah ayaa waxbarashada loo aqoonsaday inay tahay mid ku dhisan horumarka qofka bani'aadamka ah. Bulshooyinka ku sifoobay ka qaybgalka dadweynuhu waxay u haystaan ​​inay lagama maarmaan u tahay maamul -wanaagga. Tan iyo aasaaskii Qaramada Midoobay, waxay noqotay a sine qua non ee horumarinta bulshada. Mabaadiidaan asaasiga ah, oo lagu soo koobay xigashooyinka kor ku xusan ee ka soo baxay heerarka Qaramada Midoobey oo ay xaqiijiyeen bulshada rayidka ah ee caalamiga ah, ayaa hadda halis weyn ku jira xukunkii aasaasiga ahaa iyo midda xun ee Talibanka.
Waxbarasho tayo leh, u-diyaargarowga nolol dhammaystiran iyo dhalashada mas'uul ka ah bulshada dhalashada iyo ka-qaybgalka bulsho kala duwan oo si xawli ah u socota, waxaa wiiqay tarjumaadda Taalibaan ee diinta islaamka oo ah manhajyada aasaasiga ah ee dhammaan dugsiyada. Quraanku uma qoondeeyo qiimaha aadamaha oo ka yar dumarka.
Xayiraadda ba'an ee ku wajahan waxbarashada gabdhaha iyo gabdhaha da'da yar ee ka hor istaagaya dhigashada dugsiga sare iyo dhigashada jaamacadda waxay ku xad -gudbeysaa xuquuqdooda aasaasiga ah ee waxbarasho tayo leh, waxay u diideysaa bulshada awoodda dadka badhkood, waxayna hor istaagtaa horumarka dhaqaalaha iyo siyaasadda , oo u baahan mustaqbal wax ku ool u ah Afghanistan.
Ka -qaybgalayaasha iyo kuwa raacsan Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda waxay barteen labada daruuriga waxbarashada gabdhaha iyo adkaysiga barayaasha Afgaanistaan ​​siinta ayaa warbixintan ka soo diyaarisay Sakena Yacoobi, Aasaasaha Machadka Barashada Afgaanistaan. Tusaalaha ugu cad cad ee dadaalka iyo ballanqaadka mihnadeed ee barayaasha Afgaanistaan ​​ayaa ah mid si weyn loo soo sheegay shir jaraa’id, oo ay ku dalbanayaan in la bixiyo mushaharka macallimiinta.
Caqabada ugu daran uguna xanuunka badan ee hortaagan waxbarashada Afgaanistaan ​​waa xaaladda macallimiinteeda dadaalka iyo geesinimada leh. Kuwo badan ayaa bilooyin mushahar la’aan wax ku barayay, shaki kuma jiro inta ay samaynayaan tabarucayaasha kale ee bulsheed had iyo jeer. Qaar badan oo iyaga ka mid ah, rag iyo dumarba, ayaa ah kuwa keliya ee bixiya qoysaskooda.
Waqtigaan, tallaabada kaliya ee ugu wax -ku -oolka badan ee loo qaadayo daryeelka barayaashaas, qoysaskooda iyo dalkooda ayaa ah in Bangiga Adduunku ku wareejiyo qaar ka mid ah gargaarka bani'aadamnimada oo bixin kara mushaharkooda.
Warqadda ayaa la diyaariyey oo lagu faafiyay Code Pink (dib loo soo saaray iyo diyaar u ah saxiixa halkan) waxaa loo jeedinayaa Madaxweyne Biden, maaddaama Mareykanka uu Bangiga ku leeyahay miisaan ka badan ummadaha kale. Akhristayaasha waxaa lagu boorinayaa inay saxiixaan warqaddan, kuwa doonaya inay tallaabo dheeri ah qaadaan waxay si toos ah ugu gudbin karaan warqadaha Bangiga Adduunka iyo madaxdooda, iyo wakiillada Qaramada Midoobay, iyagoo ku baaqaya inay taageeraan hindisahan, iyo ururka adduunka, dhammaan hay'adaheeda iyo dhammaan xubnaha beesha caalamka si ay u dalbadaan u hoggaansanaanta heerarka caalamiga ah oo shardi u ah wax kasta iyo dhammaan la macaamilka Taliban. (-BAR, 10/5/21)
U sheeg maamulka Biden iyo Bangiga Adduunka inay sii daayaan lacagaha lagu bixinayo macallimiinta Afqaanistaan ​​& shaqaalaha caafimaadka
Haweenka Afgaanistaan ​​ayaa soo saaray baaq deg-deg ah oo ku saabsan bixinta mushaharka macallimiinta haweenka Afgaanistaan ​​iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Ku dar magacaaga codsiga ku baaqaya Maamulka Biden, Bangiga Adduunka, iyo xubnaha muhiimka ah ee Koongareeska si ay u furfuraan lacagaha Afqaanistaan ​​si ay u bixiyaan mushaharka macallimiinta Afgaanistaan ​​iyo shaqaalaha daryeelka caafimaadka.
saxiix warqadda halkan
Mudane Madaxweyne Biden, Bangiga Adduunka, iyo xubnaha muhiimka ah ee Koongareeska (hoos ka eeg xubnaha gaarka ah ee Koongareeska),
Sida laga soo xigtay haweenka Afghanistan, Taliban ayaa u oggolaanaysa gabdhaha inay dhigtaan dugsiga hoose (fasallada 1-6). Wali ma aysan furin fasalada 7-12 gabdhaha laakiin waxay balan qaadeen inay sidaas samayn doonaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira caqabad weyn: in aan la bixin mushaharka macallimiinta. Hadda waxaa jira in ka badan 120,000 oo macallimiin gabdho ah oo ka shaqeeya dugsiyada dadweynaha ee dalka oo dhan, badhkoodna waa isha kaliya ee dakhli u ah qoysaskooda. Aad bay u adag tahay, xitaa ma suurtowdo, in la waydiiyo macallimiintani inay sii wadaan waxbaridda mushahar la'aan.
Fadlan sii daa dhaqaalaha Afgaanistaan ​​si loo bixiyo mushaharka macallimiinta Afgaanistaan.
Isla dhibaatada ayaa soo food saartay shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee haweenka Afgaanistaan. Waxaa Afgaanistaan ​​ka jira in ka badan 13,000 oo shaqaale daryeel caafimaad haween ah, oo ay ku jiraan dhakhaatiir, umulisooyin, kalkaaliyayaal, tallaalayaal, iyo shaqaale kale oo dumar ah. Intooda badan waxaa la siin jiray Bangiga Adduunka iyada oo loo sii marinayo Sanduuqa Kalsoonida Dib -u -dhiska Afghanistan (ARTF), laakiin tan iyo bishii Juun, maaliyaddii ayaa joogsatay. Dhanka kale, nidaamka caafimaadku wuxuu qarka u saaran yahay burbur. Waxaa sare u kacay xaaladaha jadeecada iyo shubanka; soo noqnoqoshada cudurka dabaysha waa halis weyn; ku dhawaad ​​kala bar carruurta ayaa nafaqo -darro hayso; ku dhawaad ​​1 -dii 4tii isbitaal ee COVID ayaa xirnaa oo 2 milyan oo qiyaasood oo ah tallaallada COVID19 ayaan weli loo adeegsan shaqaale la’aanta maamusha.
Fadlan sii daa lacagtii Afqaanistaan ​​si aad u siiso shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo macallimiinta haweenka Afgaanistaan. Lacagtani waxay ka iman kartaa Bangiga Adduunka Sanduuqa Kalluumaysiga Afqaanistaan ​​ama $ 9.4 bilyan oo ka mid ah lacagtii Afqaanistaan ​​ee la xayiray bangiyada Maraykanka.
*Ka sokow qandaraaska Madaxweyne Biden, waxaan ugu baaqeynaa xubnaha soo socda ee muhiimka u ah Congress -ka arrintan:
Guddiga Adeegyada Maaliyadeed ee Guriga:
Guddoomiyaha Maxine Waters, Xubinta darajaynta Patrick McHenry, iyo Madaxweyne Ku -xigeenka Jake Auchincloss;
Guddiga Adeegyada Maaliyadeed ee Guriga ee Ganacsiga Caalamiga ah, Caadada, iyo Tartanka Caalamiga ah:
Guddoomiyaha Thomas Carper iyo Xubinta darajada John Cornyn;
Guddiga Maaliyadda ee Golaha Guurtida:
Guddoomiyaha Ron Wyden iyo Xubinta Darajada Mike Crapo;
Guddiga Senate -ka ee Bangiyada, Guryeynta, iyo Horumarinta Magaalooyinka:
Guddoomiye Sherrod Brown iyo Xubinta darajaynta Patrick Toomey;
Guddi -hoosaadka Bangiyada, Guryeynta, iyo Guddi -hoosaadka Horumarinta Magaalooyinka ee Amniga iyo xubnaha Ganacsiga iyo Maaliyadda Caalamiga ah:
Mark Warner, Bill Hagerty, Jon Tester, Jon Ossoff, Krysten Sinema, Mike Crapo, Steve Daines, John Kennedy.
LA wadaag SHAQADA:
Jaamacadda Georgtown waxay raadinaysaa Kaaliyaha Borofisar Waxbarashada - Barnaamijka Waxbarashada, Weydiinta iyo Caddaaladda
Ololaha Caalamiga ah wuxuu daahfuray mashruuca “Khariidadaynta Nabadda”
Manhajka Waxbarashada Nabadda ee ardayda reer Afgaanistaan
Waxaa laga yaabaa 25, 2016 Warbixinnada Waxqabadka, Siyaasadda 1
Caawinta Manhajka Waxbarashada Nabadda ee Carruurta Afgaanistaan ​​waa qaabkii ugu horreeyay ee qaab-dhismeed dugsi ku saleysan oo si gaar ah u bartilmaameedsada ardayda dugsiga dhexe iyo kuwa dugsiga sare u nugul, kuna dhiirrigeliya inay diidaan rabshadaha iyo dhammaan noocyada dabeecadaha gardarrada ah iyagoo isla qaadanaya mabaadi'da nolosha nabadeed, ixtiraamka kala duwanaanta , iyo iskaashi.
Qaabkan oo asal ahaan loo soo saaray 2003 saddex dugsi, ayaa ku faafay 62 iskuul oo ku yaal shan gobol, isagoo saameyn ku yeeshay in ka badan 86,000 oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Natiijooyinka ka soo baxay dugsiyadan seddexdii sano ee la soo dhaafay waxay muujiyeen hoos u dhac weyn oo xagga dagaalka ah, horumar isdaba joog ah oo fasalka iyo habdhaqanka iskuulka, iyo hoos u dhigid la mid ah macallimiinta adeegsiga ciqaabta jirka. Sannadkii 2012, iyada oo la aqoonsan yahay in ay saameyn ku yeelan karto malaayiin arday ah, Wasaaradda Waxbarashada ee Afqaanistaan ​​waxay taageertay hindisaha HTAC ee lagu ballaarinayo gobollada kale ee dalka. [sii wad akhriska…]
Bulshada Rayidka ah waxay sii wadi doontaa u -doodista Afgaanistaan
September 3, 2021 Digniinta Waxqabadka, Warar & Muuqaal 0
Markii 30 -kii Ogosto Golaha Ammanka ee Qaramada Midoobay u caddeeyay Taalibaan inay la socon doonto oo si firfircoon uga qaybqaadan doonto xaaladda xuquuqda aadanaha ee Afgaanistaan, waxay kor u qaadday caqabadda bulshada rayidka ah inay sii socoto iyo inay kordhiso tallaabadeeda si ay ugu dooddo sababaha aadanaha. ammaanka dadka Afgaanistaan. [sii wad akhriska…]
Ururka Isku-dubbaridka Gargaarka Bani'aadamnimo ee Afgaanistaan ​​wuxuu raadiyaa Tababaraha / La-Taliyaha Waxbarashada Nabadda
December 12, 2018 Jobs 0
OCHR waxay raadineysaa tababare qaran oo aqoon leh oo hogaamiya tababarka dadka soo noqday iyo barakacayaasha si kor loogu qaado dhaqanka nabada iyo rabshad la’aan ee Nangarhar iyo gobolka Kunar. Xilliga Kama Dambaynta Diiwangelinta: Diseembar 19. [sii wad akhriska…]
Gaajada Taliban - mise dadka Afgaanistaan? - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ku biir wadahadalka ... Cancel reply
Xuquuqda daabacaadda © 2020 | Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda diidmada tusmada | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ]
U dir Email Address Magacaaga Your Cinwaanka Email Cancel
Post La iima soo dirin - ka fiiri cinwaanada email aad!
Jeeg Email guuldareystay, fadlan isku day in mar kale
Sorry, aad blog ma la qaybsan karaa posts by email.